Maamullada Ximin & Xeeb iyo Galmudug oo soo dhaweeyay hawlgalkii Maraykanka ee lagu laayey burcad badeeda. – Radio Daljir
Maamullada Ximin & Xeeb iyo Galmudug oo soo dhaweeyay hawlgalkii Maraykanka ee lagu laayey burcad badeeda.
Mudug, Janu, 25 ? Maamullada Galmudug iyo Ximin iyo Xeeb ayaa si diiran usoo wada-dhaweeyay hawl-galkii ciidanka Maraykanku ay ka fuliyeen xadduud u dhaxaysa maamullada Galmudug iyo Ximin iyo Xeeb, waxaana sida wararku tilmaamayaan hawl-galkaasi ku geeryooday illaa 8 ka mida burcad-baddeedii haystay shaqaalaha DDG-da.
Afhayeenka maamulka Ximin iyo Xeeb Maxamed Cumar ?Hagafey? oo la hadlay Radio Daljir ayaa tilmaamay inaysan Maraykanku cidna kala tashan hawl-galkaasi, ayna ku guulaysteen inay dib xorriyadooda u siiyaan lahaystayaashaasi u kala dhashay dalalka Maraykanka iyo Denmark.
Dhica kale, talyaha guud ee ciidanka booliska maamulka Galmudug Cabdi Xassan ?Qooray? oo isna u waramay Radio Daljir ayaa tilmaamay Galmudug ahaan inay hawl-galkaasi soo dhawaynayaan, xilligaana ay maamulka Galmudug ku mashquul-sanyihiin sidii ay xorriyadiisa dib ugu soo celin-lahaayeen wariye u dhashay dalka Jarmalka balse haysta dhalashada dalka Maraykanka.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa isi soo tararayay afduubyada maraakiibta iyo shaqaalaha ajaanibta samafalayaasha ah loogu geysanaayo dhulka ay maamulaan maamullada Ximin iyo Xeeb iyo Galmudug.